China voa fanadiovana sy fanodinana milina 5XZS-10DS mpanamboatra sy mpamatsy | SYNMEC
Machine fanadiovana sy fanodinana voa 5XZS-10DS
Ny fiasan'ny 5XZS-10DS Seed Cleaning & Processing Machine: famafazana varimbazaha (tsy voatery), fanadiovana rivotra, fanadiovana mialoha ny vibration, fanasarahana gravité ary fanadiovana tsara.
5XZS-10DS milina fanadiovana sy fanodinana voa
Ny varimbazaha dia arotsaka ao amin'ny mpanangom-bary (tsy voatery) atao akorandriaka, avy eo atsangana amin'ny alàlan'ny ascenseur siny, miditra ao amin'ny vatan-kazo fanasivanana vibration kely mba hanesorana haingana ny loto kely sy lehibe ary ny loto maivana, avy eo ny varimbazaha dia miditra amin'ny latabatry ny gravité mba hanesorana ny voa ratsy (ampahany). nohanina, tsy matotra, simba ny bibikely, voa marary, sns.). Farany dia miditra ao amin'ny vatan-kazo fanasivanana vibration ny varimbazaha mba hanesorana ny loto lehibe sy kely indray, ary manasokajy ny voa amin'ny laharana samihafa. Ny varimbazaha avy any ivelany dia lasa voa azo afafy mivantana amin'ny tany.
Asa: Fanadiovana rivotra, fanadiovana mialoha, fisarahana amin'ny gravity, fanadiovana sy fanasokajiana vibration.
fahafahana: 10 taonina/ora ho an'ny voa (anisa amin'ny varimbazaha)
tahan'ny fanadiovana: >97%
Karazana fanadiovana sivana: Vibration baolina fingotra
Fampidirana herinaratra: 3 phase
Hery: Total: 15.75Kw
Siny ascenseur: 0.75Kw
Motor vibration mialoha fanadiovana: 0.25Kw X 2 sets
Top rivotra blower: 5.5Kw
Gravity latabatra: 7.5Kw
Moto sieving trunk vibration lehibe: 0.75Kw X 2 sets
5XZS-10DS Seed Cleaning & Processing Machine dia natao amin'ny fanadiovana rivotra, fanadiovana mialoha, fisarahana amin'ny gravité, fanadiovana sivana vibration ary fanasokajiana. Ity maodely ity dia misy fiasa maro be amin'ny fanadiovana maso karazana finday iray ka mahatonga azy io ho tsara kokoa ho an'ny fampiharana mivelatra kokoa.
Multifunctions mitambatra ao anaty milina iray
1. Fanadiovana mialoha 2. Aspirator an'habakabaka 3. Tabilao gravity 4. Vata fanasivanana
Ny hopper intake dia mamela ny famenoana varimbazaha ao amin'ny mpametraka varimbazaha mba hanongotra ny varimbazaha. Avy eo ny varimbazaha avy amin'ny siny ascenseur hopper dia entina mankany amin'ny fanadiovana mialoha. Esory haingana ny loto ambany sy be loatra, ary arotsaka ao amin'ny efitrano fanadiovana rivotra ny voa mba hanesorana ny loto sy vovoka maivana. Ny efitrano fanadiovana rivotra lehibe dia hitondra ny fahombiazan'ny fanadiovana rivotra tsara indrindra. Avy eo dia miditra ao amin'ny separator gravité ny akora voadio rivotra mba hanesorana ireo voa ratsy (ampahany nohanina, tsy matotra, simba ny bibikely, voa marary, sns). Rehefa avy nokarakaraina tamin'ny alalan'ny gravity separator, ny voa dia ho tonga amin'ny roa amin'ny vatan-kazo sivana iray mihovitrovitra mba hanesorana ny loto lehibe sy kely. Ny mpanjifa ihany koa dia afaka misafidy sivana efatra sosona sieving vatan-kazo izay tsy vitan'ny hoe manala ny lehibe sy kely loto, fa koa grading ny voa ho ambaratonga telo amin'ny habeny (lehibe, antonony ary kely).
teo aloha: 5XZS-20DS milina fanadiovana voamaina madio ho an'ny ampemby katsaka sesame
Manaraka: 5XZS-10DGT milina fanadiovana sy fanodinana voa
Ozinina fanodinana voan-kafe
Ozinina fanodinana kafe
Orinasa mpanodina voa voa
Orinasa fanodinana voa katsaka
Ozinina fanodinana tanimbary
Ozinina fanodinana voa varimbazaha
5XQS-5 Destoner ho an'ny katsaka voan-kafe paddy ric...
Belt conveyor ho an'ny voamaina tsaramaso varimbazaha
5M-2 Ozinina fanodinana masomboly finday